Tattoo ugu yar ee lamaanayaasha doonaya inay muujiyaan jacaylkooda | tattooists
Tattooyada ugu yar ee lammaanaha raba inay muujiyaan jacaylkooda
Ma aha Cherry | 18/04/2022 11:32 | Tattoos leh qaabab
Tattooyada ugu yar ee lammaanaha ayaa ah bakooradda: kaliya maaha inay caqli badan yihiin, laakiin waxay noqon karaan kuwo aad iyo aad u mala awaal ah. iyo wax badan, maadaama mid walba uu xiran karo naqshad isku mid ah, kala duwan ama kaabayaal ah, ujeedadu waa inaad u dabaaldegto jacaylkaaga!
Taasi waa sababta maanta Waxaan ku diyaarinay boostadan oo leh fikrado badan oo kala duwan si aad u hesho tattoo gaarka ah. Oo haddii aad rabto dhiirigelin dheeraad ah, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso qoraalkan kale tattoos yar oo loogu talagalay lammaanaha.
1 Fikradaha tattoos ugu yar ee lammaanaha
1.1 Tattoo warqad
1.1.1 Kalmad ama odhaah badhkeed
1.1.2 jilayaasha iyo kanji
1.1.4 Midig iyo foorari
1.1.5 K iyo Q
1.2 Tattoos la isku daro
1.2.1 fallaadho isu soo baxa
1.2.2 qorrax iyo dayaxyo
1.2.3 Pacman oo raadinaya ruuxiisa
1.2.4 gacmaha isku xiran
1.2.5 qafis iyo shimbiraha
1.3 Isku mid ah laakiin kala duwan tattoos
1.3.1 Tattoos ee farta giraanta
1.3.2 Faraha faraha
1.3.5 iyada oo la raadinayo kan kale
2 Sawirada tattoos ugu yar ee lammaanaha
Fikradaha tattoos ugu yar ee lammaanaha
hay boqollaal iyo boqollaal fursadood oo lagu heli karo tattoo qumman ee qumman ee lammaanaha. Hoos waxaan ku soo ururinay wax aan ka yarayn shan iyo toban fikrado maaha inaad nuqul ka sameyso, laakiin si aad u dhisto oo aad u hesho qaybtaada qumman.
Tattoo xarfaha waa mid ka mid ah fursadaha ugu caansan ee tattoos lamaanaha, ma aha oo kaliya inay yihiin kuwo caqli-gal ah, laakiin waxay kuu oggolaanayaan inaad ku ciyaarto waxyaabo ay ka mid yihiin qoraallada. Aynu eegno dhawr fursadood oo aad u xiiso badan:
Kalmad ama odhaah badhkeed
Mid kastaa wuxuu qaadan karaa hal jumlad badhkeed ama eray adiga kuu gaar ah. Inkasta oo tusaalaha sawirku uu aad u cad yahay, waxaa jira erayo kale oo badan oo ku siin kara maroojin lama filaan ah oo tattoo ah.
jilayaasha iyo kanji
Jilayaasha Shiinaha ama kanjiska Jabbaan sidoo kale Waxaa si weyn loogu isticmaalaa tattoos loogu talagalay lammaanayaasha miyir-qabka ah, maadaama ay yihiin hab lagu muujiyo jacaylkaaga si kasii caqli badan sida caadiga ah. Kaliya waa inaad hubisaa inay dhab ahaantii dhigayso waxaad rabto.
Taariikhaha Waxay yihiin mid kale oo ka mid ah tattoos-yada ugu caansan marka la raadinayo naqshad si taxadar leh iyo isla mar ahaantaana shakhsi ahaaneed.. Dhab ahaantii, inkasta oo aysan u muuqan, waxay noqon karaan kuwo aad u badan, maadaama lagu dhex dari karo sawirro kale, isticmaal nambarada Carabiga ama Roomaanka ...
Midig iyo foorari
Inkasta oo tusaalaha sawirku uu yahay tattoo ku meel gaar ah, waxaa habboon in la eego naqshaddan tattoos mustaqbalka: ereyga la doortay waa jacayl / eros, ku ciyaarista qoraalka iyo rogida xarfaha, naqshad asal ah ayaa la gaaray iyo in labada lamaane ay noqon karaan kuwo aad u wanaagsan. Sida iska cad, haddii aad rabto inaad asal noqoto, waxaad ku ciyaari kartaa waxyaabo kale, sida magacyadaada, magaca meesha aad ku guursatay...
K iyo Q
Xarfaha K iyo Q sidoo kale aad bay caan u yihiin marka ay timaado in la helo tattoo asturan oo leh waxyaabo jacayl isku mar, tan iyo markii Waxa loola jeedaa laba kaadh oo turub, boqorka iyo boqoradda. Caadiyan mid wuxuu ku baxaa madow, kan kalena casaanka. Waxa kale oo aad ku ciyaari kartaa suudhadhka, tusaale ahaan, mid sita spades iyo wadnaha kale.
Tattoos la isku daro
Tattooyada ay naqshadeynta isku dhafan tahay waxay leeyihiin sifooyin gaar ah oo ay si gaar ah u shaqeyn karaan, laakiin si wada jir ah waxay u sameeyaan naqshad dhamaystiran oo xitaa qaadan karta macne lama filaan ah.
fallaadho isu soo baxa
Tattoogan, sida aad sawirka ku arki karto, gaar ahaan si fiican ugu habboon farta giraanta. Fikradda ayaa ah in mid ka mid ah uu xambaarsan yahay saldhigga taariikhda iyo kan kale caarada iyo in, marka la isku daro faraha, naqshad dhamaystiran ayaa u muuqata.
qorrax iyo dayaxyo
Ama xiddigo kale oo si fiican isugu darsamay ama adiga kugu gaar ah. Mid kastaa wuxuu qaadi karaa xiddig, taas oo marka la isku daro waxay siinaysaa qallooc xiiso leh ama jaceyl. Kuwa ugu cadcad waa qorraxda iyo dayaxa, laakiin waxaad sidoo kale ku ciyaari kartaa xiddigaha, wejiyada dayaxa...
Pacman oo raadinaya ruuxiisa
Pacman wuxuu cunaa rooxaanta isagoo raacaya waddo kubbado cadcad ah, iyo waxa tattoo-gani sameeyo ayaa siinaya fikrad aad u fiican, maaddaama qayb kasta oo ka mid ah lammaanuhu ay siddo Pacman ama jinni. Waxay xitaa ku habboon tahay lammaanaha polyamorous, maadaama mid walba uu xiran karo jinni midab kala duwan.
gacmaha isku xiran
gacmaha isku xidhan Waxay calaamad u yihiin ma aha oo kaliya jacaylka, laakiin sidoo kale saaxiibtinimada.. Waxaad yeelan kartaa tattoos isku mid ah, laakiin waxa ugu xiisaha badan ayaa ah inaad hesho naqshad adiga kuu gaar ah (adoo isticmaalaya gacmaha kuwa kale sida tusaale ahaan) ama inaad adigu sal u tahay fasalada, sida matalaadda caadiga ah ee Michelangelo sawirka.
qafis iyo shimbiraha
Waxay u muuqataa in si lama filaan ah qafisyada iyo shimbiraha aysan si fiican isugu darsanayn sababtoo ah qafisku wuxuu calaamad u yahay wax naga reebaya xorriyadda. Si kastaba ha ahaatee, Astaan ​​aan la filayn waa shimbirka iskeed ugu laabta guriga (oo aan albaabka qafiska la xidhin) oo leh waa maxay naqshad sidoo kale si fiican u shaqeysa labada lamaane.
Isku mid ah laakiin kala duwan tattoos
Fursad kale oo aad u fiican oo loogu talagalay tattoos-ka-xiran ee lammaanaha waxaa ka mid ah inaad siddo naqshad isku mid ah, kuwaas oo mararka qaarkood noqon kara isku mid iyo waqtiyo kale oo leh kala duwanaansho yar. Tusaale ahaan:
Tattoos ee farta giraanta
A classic of tattoos lamaanaha, tattoos ku yaal farta giraanta waxay muujinayaan in lagu qabtay, xitaa inaad guursatay. Waxa kaliya ee xun ee ku saabsan tattoo-yadani waa inay u baahan yihiin taabasho joogto ah, tan iyo dusha sare ee farta, nooca maqaarka iyo barkinta yar ee hoose, waxay keentaa in khadku aanu si fiican u nuugin.
Sida suurtogalka ah, waxaa jira waxyaabo badan: laga bilaabo giraangiraha, ilaa barroosinnada (taas oo sidoo kale gudbisa fikradda ah in aad isku xidhan tihiin), taariikhaha, erayada, kan kale magaciisa...
Suurtagalnimada asalka ah oo ka duwan wixii aan aragnay: Waxaad midba midka kale ku qaadi kartaa farahaaga maqaarkaaga, oo uu weligii taabto qofkaas gaarka ah. Haddii aad rabto inaad si cad u muujiso, dhig naqshadeynta qaabka wadnaha.
Boqorka iyo boqoradda guriga, xiriirka, qalbiga kan kale: malaha waa sababta tattoos sida taajka ayaa u shaqeeya sidoo kale tattoos lamaanaha ugu yar. Haddii, marka lagu daro, halkii aad ku qanacsan tahay naqshadeynta taajka isku midka ah, waxaad ku dari kartaa dhadhanka shakhsi ahaaneed ee mid kasta, natiijadu waa mid aad u xiiso badan.
Hagaag, uma eka sida ikhtiyaarka ugu jaceylka badan, laakiin haddii aad diintu midowdo waxay noqon kartaa naqshad fiican. Iskutallaabtu waxay tixraacaysaa iimaanka, haddii aad ku darto waxyaabo kale sida taariikhaha, waxay sidoo kale tixraaci karaan maalinta guurka, tusaale ahaan.
iyada oo la raadinayo kan kale
Suurtagalnimada kale ee ugu yar oo aad u fiican ayaa ah in la sawiro jilaa (sawirka waa avokado, laakiin waxay noqon kartaa wax kasta oo aad jeceshahay, tusaale ahaan, bisaddaada, wiilkaaga ...) u daa inuu raadiyo midka kale. Khiyaanada tattoo waa in aysan ahayn sida Pacman's (oo aan kor ku soo sheegnay), laakiin uu u gacan haadinayo dhinac, kan kalena dhinaca ka soo horjeeda, sidaas darteed sida muuqata ma jirto waddo u dhaxaysa labadooda ilaa aad wada joogtaan. .
Y Waxaan ku dhammeyneynaa electrocardiogram, laga yaabee naqshad si cadaalad ah loo arkay, kaas oo lagu dari karo siyaabo aan xadidneyn oo suurtagal ah.: laga bilaabo kaliya xariiqda mawjadaha ilaa la isku daro qalbiyada, timirta, samaynta midab, madow iyo caddaan, faraha, laabta ...
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkan ku saabsan tattoos ugu yar ee lammaanaha uu ku siiyay fikrado si aad u hesho tattoo-gaaga qumman. Noo sheeg, waa maxay sheekadaada jacayl? Horay ma u leedahay laba tattoo? Waa sidee?
Sawirada tattoos ugu yar ee lammaanaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh qaabab » Tattooyada ugu yar ee lammaanaha raba inay muujiyaan jacaylkooda
Sida loo doorto istuudiyaha tattoo ugu fiican